Chengeta Zvipikirwa Zvako | Martech Zone
Chengeta Zvipikirwa Zvako
China, November 12, 2009 Chitatu, Kukadzi 10, 2016 Douglas Karr
Shamwari yaindiudza nyaya rimwe zuva. Iye akange anzwa kuti akange apiswa nekambani yaakange achiita bhizinesi nayo uye aida kubuda nezvayo. Mwedzi yakati wandei yapfuura, pakatanga hukama, vaigara pasi vobvumirana kuti vachashanda sei pamwe chete, vachitsanangura kuti ndiani aizoita chii uye riini. Zvinhu zvakaratidzika zvakanaka pakutanga. Asi apo chikamu chehusiku chakatanga kupfeka, akaona zviratidzo zvekuti zvese zvaive zvisiri sezvainge zvataurwa.
Muchokwadi, iyo imwe kambani yakanga isiri kuchengeta chaiko vimbiso dzavakaita. Akataurirana zvaimunetsa navo uye vakavimbisa kuti ngazvirege kuitika zvakare, kuti varambe vari mugwara. Ndine chokwadi chekuti unogona kuona kuti izvi zviri kuenda kupi. Munguva pfupi yapfuura vakazviita zvakare 'uye panguva ino nenzira hombe. Vakabvumirana kusvika pamamiriro ezvinhu neimwe nzira uye mumwe wevakomana vavo zvachose uye vachiziva vakaifuridza. Akafamba achibva pabhizinesi.
Izvi zvinei chekuita nekutengesa? Zvese.
Zvese zvaunoita kushambadzira
Kwete chete kushambadzira kwako uye ako blog mablog uye ako mawebhusaiti uye ako ekutengesa mapaki. Zvese. Uye kana iwe ukaita zvipikirwa zvakajeka kana zvisina tsarukano, urikukumbira mumwe munhu kuti avimbe newe. Kana iwe uine rombo rakanaka, ivo vanokupa iwe chivimbo chavo. Ukasasimudzira zvawakavimbisa, vanozotadza kuvimba newe. Zviri nyore kudaro.
Kana iwe uchireva kuti chigadzirwa chako ndicho chinonyanya kukurumidza, zvirinani kuve chinokurumidza. Kana iwe ukati unopindura mafoni mumaawa makumi maviri nemana, zvirinani upindure mafoni mumaawa makumi maviri nemana. Kwete ifs, ands, kana buts. Vanhu vanogona kuregerera. Unogona kukanganisa. Iwe uchafanirwa kuwana izvo zvishoma zvekuvimba zvawakarasa.
Asi, haugone kunyengera nemaune. Hazvibvumirwe. Taura zvauchazoita wozozviita. Amai vaigara vachiti,
Kana iwe ukaita vimbiso, chengeta.
Ndiani aiziva kuti aitaura nezve bhizinesi, futi '
5 Yemagariro Networking Matanho eVatengesi Nyanzvi
Google Iri Kuedza Kuita Kuti Webhu ive Nani?
Mbudzi 12, 2009 na11: 05 PM
"Zvese zvaunoita kushambadza". Wakairovera nemutsara uyu. Kunyangwe paunomuka ukazvitarisa mugirazi, pane kushambadzira kunosanganisirwa: uri kuzvitengesa pachako kwauri. Kana iwe ukaratidzika kunge wakaneta, iwe unonzwa kuneta. Kana iwe uchitaridzika uine simba, oh mukomana, chenjera! Richava zuva rakanaka! Thanks Nila. –Pauro
Nov 13, 2009 pa12: 36AM
Anenge makore gumi apfuura mumwe wevandinofarira vekutengesa vanhu akandiudza izvi: Unofanirwa kutaurira mutengi chokwadi ka10 nguva vasati vavimba newe asi kana ukachirasa kunyangwe kamwe chete havazombokuvimba zvakare. Kana iwe uchitaura, chiite.
Mbudzi 12, 2009 na10: 12 PM
Wataura chokwadi! Ini ndakashanda kumamwe makambani aive nezvikwata zvekutengesa izvo zvaingoyamwa vanhu nezvipikirwa zvemhedzisiro - izvo zvavaiziva kuti havagone kusangana. Dambudziko raisangova dambudziko rekutengesa uye rekushambadzira, rakange rakatonyanya kudzika sezvo rakakanganisa rutsigiro rwevatengi nevashandi veakaunzi account. Hapana chinhu chinotyisa sekumisa tarisiro dzausingafanire kunge uchiita!
Anotyisa post! Ndatenda zvikuru nekugovana!
Mbudzi 13, 2009 na1: 21 PM
Chinhu chakakosha kurangarira ipfungwa yeshanduko. Kana iwe ukakanganisa pane chimwe chinhu chigadzirise uye edza kusamboita iko kukanganisa zvakare.